Uhlelo Lwezinyathelo Ezi-5 Lokusetshenziswa Kwama-Checkout Wakho Abathengi. | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 13, i-2017 NgoMsombuluko, Juni 12, 2017 UTom Mucklow
Ngokusho kukaStatista, ngo-2016, abantu abayizigidi eziyi-177.4 basebenzise amaselula ukuthenga, ukucwaninga nokubhekabheka imikhiqizo. Lesi sibalo kubikezelwa ukuthi sizofinyelela cishe kwizigidi ezingama-200 ngonyaka we-2018. Futhi umbiko omusha owenziwe ngu Ikheli ucaphune lokho Ukulahlwa kwenqola kufinyelele esilinganisweni esiphakathi esingu-66% e-US.
Abathengisi abaku-inthanethi abanganikeli ngesipiliyoni esihle seselula kungenzeka baphuthelwe yibhizinisi. Kubalulekile ukuthi bagcine abathengi behlanganyela kuyo yonke inqubo yokuphuma. Ngezansi kunezinto ezinhlanu abathengisi abangazenza ukwengeza amafomu ewebhu kubathengi beselula.
Sebenzisa amabha wenqubekela phambili - Ngokuvumela amakhasimende akho ukuthi abone ukuthi iyiphi ingxenye yenqubo yokuphuma asebeyiqedile nokuthi yini okusazokwenzeka, awususi kuphela ukukhungatheka, ubazise ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani, kodwa futhi ubavumela ukuba balungiselele isinyathelo esilandelayo . Lokhu kubenza babe nethuba lokuthola imininingwane yokukhokha noma amavawusha esipho elungile.
Amaphutha ambalwa ngeType-Ahead Technology - Ukugcwalisa amafomu aku-inthanethi kungadla isikhathi futhi ngokusho kweBaymard Institute, isilinganiso sokushiya inqola esilinganiselwe singama-69.23% ngenxa yezinqubo zokuphuma eziyinkimbinkimbi ngokweqile. Ngaphezu kwalokhu, i-Mobile Commerce Daily isanda kuveza ukuthi u-47% uyeke ukuthenga kwe-mCommerce ngoba inqubo yokuphuma yinde kakhulu. fika ngesikhathi futhi ungenamaphutha. Kuyasiza futhi ukugwema ukulahlwa yinqola ngokugcina amakhasimende egxile ekuqedeni inqubo yokuphuma.
Sebenzisa Izinkambu Nemibhalo Eqondaniswe Ngokuphezulu - Amalebula wokubeka ngaphezulu kwezinkambu zefomu kuvame ukusebenza ngempumelelo kunokuzibeka eceleni kwezinkambu njengoba kulula ukuzibuka kumadivayisi eselula. Lokhu kususa isidingo sokuskrola noma ukusondeza ngaphakathi. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi izinkambu zifakwe ilebula, okuvumela amakhasimende ukuthi aqonde ukuthi yiluphi ulwazi adinga ukulufaka. Lokhu kungathuthukiswa ngokungezwa kwesibonelo, esingasebenza kahle kakhulu lapho udinga ifomethi ethile, isb. MM / DD / YY.
Thola Usayizi Kwesokudla - Sonke siyazi ukuthi usayizi wesikrini somakhalekhukhwini ungaba nenkinga kwesinye isikhathi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi lapho ufaka imininingwane kumafomu ewebhu, futhi kungaholela ekufakweni kwamaphutha, noma ngokuchofoza ngephutha izixhumanisi ezingasisusa ekuphumeni.Njengoba amadivayisi eselula ebaluleke kakhulu ekuthengeni nge-inthanethi, abathengisi kudingeka baqiniseke ukuthi ukubhekana nalolu daba, nokuqinisekisa ukuthi abathengi banolwazi olulinganayo ngokulingana kwamakhasimende, noma ngabe bathenga ngeselula noma ideskithophu. Lokhu kungatholakala ngokukhulisa usayizi wenkambu yefomu nezinkinobho zamasayizi esikrini seselula.Ukusebenzisa inkambu yokusesha yekheli elilodwa akugcini nje ngokusiza imodeli yengqondo yokucinga ikheli kepha kusho ukuthi awudingi ukuthatha isikhala esiningi form ngezinkambu zomugqa ngamunye wekheli. Ifomu libonakala lilula futhi lingesabi ngenxa yalokho.
Hola ikhibhodi efanelekile - Faka nezimpawu ezifanele kukhodi ye-HTML ukuthola ikhibhodi efaneleke kakhulu yefomethi yokufaka. Qiniseka ukuthi inkambu imakwe kahle ukunciphisa umthwalo wokuqonda nokwenza inqubo yokufaka imininingwane ibushelelezi. Elinye icebo ukumisa isiphequluli seselula kumazwi okulungisa ngokuzenzakalela. Lokhu kubalulekile ezimweni lapho, ngokwesibonelo, igama lomgwaqo lingabonwa njengegama elifanele.
Tags: amalebulamcommerceinqola yeselulaukuphuma kweselulacommerce mobileukuhweba ngeselula ecommercemobile ephendulayousayizi wesibuko seselulainqola yokuthenga ephathekayoimigoqo yenqubekela phambiliusayizi weskriniizinkambu eziqondaniswe phezuluuhlobo-phambili ubuchwepheshe
UTom Mucklow uhola i- Ikheli ithimba ekunikezeni izixazululo eziphelele nezisebenzayo ekuthengeni nasekudiliveni online ukukhathazeka e-US Ipulatifomu yokuqinisekisa ikheli elisezingeni eliphakeme yenza ngcono futhi ilulaze inqubo yokuphuma yabathengisi be-inthanethi namakhasimende abo ngokugcwalisa imininingwane yekheli ngokuzenzakalela, ukunciphisa imiphumela nge-keystroke ngayinye, nokuqinisekisa idatha yekheli enembile yamazwe angaphezu kwama-240 emhlabeni jikelele. Njengomholi we-Addressy, uTom usebenza ukudlulisa ukonga izindleko, ulwazi lomsebenzisi, kanye nezinzuzo zekhwalithi yedatha yobuchwepheshe bokuqinisekisa ikheli lamakhemikhali kumabhizinisi akulo lonke elase-US